सुशान्त सिंह राजपूत प्रकरणमा नयाँ खुलासा ! - Sidha News
सुशान्त सिंह राजपूत प्रकरणमा नयाँ खुलासा !
.सुशान्त सिंह राजपूत अवसान प्रकरणलाई लिएर दिनहुँ नयाँ-नयाँ तथ्य उजागर भइरहेका छन्। सुशान्तलाई नजिकबाट चिन्ने देखि सँगै काम गरेका सम्मका बयानहरु सार्वजनिक भइरहेका छन्। सुशान्तका ड्राइभर, पर्सनल ट्रेनर देखि कुकले समेत सार्वजनिक रुपमा सुशान्तलाई लिएर आफ्नो धारणा राखिसकेको अवस्था छ।
सुशान्त डिप्रेशनमा थिए भन्ने दावीहरुलाई प्रतिवाद गर्ने गरी बयान आइरहेका बेला सुशान्तको सम्बन्धमा एक आध्यात्मिक गुरुले नयाँ खुलासा गरेका छन्। एक भारतीय मिडिया मार्फत सार्वजनिक रुपमै एक साधुले रिया चक्रवर्तीले आफूलाई सम्पर्क गरेको दावी गरेका छन्।
आध्यात्मिक गुरु महेश सदाशिव जोशीले हालसालै एक टेलिभिजन च्यानलसँग कुराकानी गर्दै रिया चक्रवर्ती र सुशान्त सिंह राजपूतका बारे केहि खुलासा गरेका हुन्। गुगलमा खोजेर आफूलाई रियाले खोजेको र सुशान्तका बारेमा कुरा गरेको उनले बताएका छन्। रियाले सुशान्त सिंह राजपूतलाई डिप्रेसनबाट बाहिर निकाल्न भन्दै आफूसँग सम्पर्क गरेको उनको दावी छ।“म सुशान्त सिंह राजपूतलाई २२ नोभेम्बरमा भेटेको थिएँ। मलाई भेटेपछि २३ नोभेम्बरमा उनले आफूले केहि राम्रो महसुस गरेको बताएका थिए। रिया चक्रवर्तीले मलाई गुगलमा फेला पारेकी थिइन्। सोहि विषयलाई लिएर मलाई बान्द्रा पुलिस स्टेशनमा समेत बोलाइएको थियो। तर, कोरोना महामारीका कारण म गइन।”,अन्तर्वार्ताका क्रममा उनले भनेका छन्। (एजेन्सी )
पटक-पटक ‘सैन्य कू’ हुँदै आएको मालिमा नागरिक सरकार गठनको तयारी
चीनको युनान पुग्यो सलह, १० हजार ३८९ हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रको बालीनाला सखाप
अमिताभ बच्चनले जिते कोरोना